Challenges of regional cooperation on utilizing water resources - Akhabar Nepal
एमसीसी विकल्पको रूपमा खनिजसँग सम्बन्धित जनशक्ति तयार गरि समृद्ध राष्ट्र बनाऔं
नेपाल खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक हो ।...
सकेसम्म रोग लाग्न नदिनु नै सबैभन्दा राम्रो हो। रोग लागिहाले...
विश्वव्यापी रुपमा जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा रहेको बेरोजगारिताको न्यूनीकरणको एउटा दर्बिलो...
पदविचलन कि लोकाचार ? या अन्य कुनै ?
विगत १७ महिनादेखि हाम्रो देश नेपाल कोभिड-१९ को विश्व महामारीबाट...
के नेपालको लागि भर्च्युअल मौद्रिक नीति आवश्यक छ ?
विश्वबजारको, विशेष गरेर विकसित तथा वैभवशाली राष्ट्रहरूको, मौद्रिक नीतिले नयाँ...
नेपाल विकासोन्मुख देश हो । विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक...
Now Nepal Telecom’s Data, Voice and SMS packs purchasable from Khalti Digital Wallet
‘Muktinath Remit’ will provide remit services from Australia